लोकप्रिय - कालिगण्डकीमा बजार अनुगमन,अखाद्य वस्तुको नष्ट
कालिगण्डकीमा बजार अनुगमन,अखाद्य वस्तुको नष्ट
स्याङ्गजा । कालिगण्डकी गाउँपालिकाको मिर्मीमा बजार अनुगमन भएको छ । बजारमा रहेका अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रेका पेय तथा खाद्य पदार्थ गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश खनालको संयोजकत्वमा रहेको बजार अनुगमन टोलीले नष्ट समेत गरेको छ। टोलीले अनुगमनमा पसल सञ्चालकले म्याद गुज्रेका विभिन्न खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरेको पाइएको कारण त्यसलाई नष्ट गरी अब त्यस्तो नगर्न पसल सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ । सो क्षेत्रका पसलमध्ये आठ वटा पसलमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुको समेत प्रयोग गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पाएपछि ती सामग्री नष्ट गरिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
मालुङ्गा हत्या प्रकरण : महिलामाथि शिक्षककाे हातपात, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी किन माैन ?
स्याङ्गजा । गल्याङ्ग नगरपालिका वडा नं १ का महिलाहरु यतिबेला न्याय चाहियो भन्दै कहिले प्रहरी कार्यालय धाएका छन् त कहिले ठाँउ ठाँउमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै न्यायका लागि लडिरहेका छन् । उनीहरु यसरी प्रस्तुत हुनुको मुख्य कारण हो, गत जेठ १३ गते गल्याङ्ग नगरपालिका वडा नं १ को मालुङ्गा भेडावारीमा भएको सीता बस्यालको रहस्यमयी मृत्यु । शुक्रवार पनि मालुङ्गाको अर्बाैदीमा पिडित पक्षले न्यायका लागि भन्दै एक सभा ग¥यो । सभामा उपस्थित थिए वडाका सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि र घटनासँग सम्बन्धित अनि सरोकारवाला आम जनमानस ।	थप पढ्नुहोस्
भीरकोट नगरपालिकाको बजेट जनमुखी विकासको आधार हुनेछ : वडाध्यक्ष अधिकारी
स्याङ्गजा । भीरकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाले पारित गरेको छ । आगामी आ.व ०७६/७७ का लागि उत्कृष्ट निति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याइने बताउछन् भीरकोट नगरपालिका वडा नं ५ का अध्यक्ष याम प्रसाद अधिकारी ‘लक्ष्मण’ उनि भन्छन,‘‘हामिले निति र नियममा आधारित रहदै स्थानिय सरकारबाट निर्दिष्ट प्रकृया अनुसार नै गाँउ बस्ती स्तरका योजना संकलन छलफल परामर्श गर्दै नितान्त जनताको आवश्यकता अनुरुपका योजनाहरु बनाएर आगामी आ. व का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौ । यो बजेट जनमुखी छ ।	थप पढ्नुहोस्
लामखुट्टेले आजित हुनुहुन्छ ? ४ सरल घरेलु उपाय अपनाउनुस
एजेन्सी । गर्मीयाम सुरु भइसकेको छ । यही मौसममा लामखुट्टेहरू बढी सक्रिय हुन्छन् । लामखुट्टेको टोकाइबाट विभिन्न रोग फैलनुका साथै अन्य खतरा पनि निम्तिन सक्छ । लामखुट्टेबाट छुटकारा पाउन धेरै किसिमका धूप र ‘लिक्विड’हरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर यिनमा धेरै केमिकल हुन्छ । यी केमिकलले केही समयको लागि लामखुट्टेलाई भगाएपनि यसको प्रयोगले धेरैजसोलाई एलर्जी र अन्य विभिन्न समस्याहरू हुने गर्दछ । बजारमा पाइने ल्याएको धूप र लिक्विडको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नै हुने गर्छ ।	थप पढ्नुहोस्
बसिन्डाँडादेखि सार्वजनिक माविसम्मको सडक कालोपत्रे, स्थानियहरू स्व. कमल पंङ्गेनी सम्झदै
स्याङजा । जिल्लाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं १ मालुङ्गा बसिन्डाँडा देखि सोही वडाको सार्वजनिक मा वि सम्मको सडक कालोपत्रे सुरु भएको छ । लामो समयसम्म कालो पत्रे हुन नसकेको मालुङ्गा बास्टारी बारिचौर सडक अन्तर्गतकोे १४०० मिटर सडक तिन करोडको लागतमा सम्पन्न हुन लागेको हो । गत आ.व. २०७४/०७५ को असारमा शहरी विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत टेन्डर प्रकृयाबाट गजेन्द्र निर्माण सेवालाई कालोपत्रेको जिम्मा प्रदान गरेपछि यो सडकको कालोपत्रे सम्पन्न हुने भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
भारतमा दोहोरिने नै हाे त मोदीपथ ?
काठमाडाैँ । आज बिहीवार अर्थात मे २३ लामो र तिक्ततापूर्ण निर्वाचन अभियानपश्चात् भारतीय मतदाताले विजय उत्सव मनाउने दिनको सुरुवात हुनेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सन् २०१४ को चुनावमा पाएको बहुमत कायम राख्न यसपटक धेरै मेहनत गरेको छ। देशभरि मोदीको चुनावी सङ्घर्ष विपक्षी कांग्रेस तथा शक्तिशाली क्षेत्रीय दलहरूसँग भएको थियो। मतदान गरेर फर्किएका मतदाताहरूसँग सोधेर गरिएका एक्जिट पोल भनिने मत सर्वेक्षणहरूले मोदीले पुनः जित्ने भविष्यवाणी गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
३० करोड पुँजी भएका नेकपाका दुई भीआइपी सुकुम्वासी
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा नेकपाका दुई भीआइपी सुकुम्वासी मुसिएका छन् । गएको बैशाख २३ मा पक्ष, विपक्ष सबै सरकारको नीति र कार्यक्रममा आफनो धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल चाहिँ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा आफुलाई सकेसम्म चोखो देखाउने प्रयासमा नै धेरैसमय खर्चिरहेका पाइए । उनले त्यसदिन धेरैपटक दोहोर्‍याए –दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु ।	थप पढ्नुहोस्
‘द भ्वाइस’मा निर्मला हत्याको मार्मिक गीत, कोच र दर्शक भावुक !
काठमाडौं । भोजपुरका तेजेन्द्र गन्धर्वले ‘द भ्वाइस’ कार्यक्रम मार्फत निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयलाई समेटेर गीत प्रस्तुत गरेका छन् । घटनाको सम्पूर्ण विवरणलाई समेटेर बनाएको निकै मार्मिक गीत आइतबार रातीको कार्यक्रममा तेजेन्द्रले गाएको गीत २४ घण्टा नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । तेजेन्द्रले सारङ्गी रेटेर गाएको गीतमा निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्या र त्यसपछिको अनुसन्धानका विषय समटेका छन् । ‘द भ्वाइस’मा निर्मला पन्तको घटनाको गीत सुनाउँदा कोच र दर्शक भावुक बनेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
सरकारले धानको मूल्य नतोक्दा पश्चिम तराईका किसान मर्कामा
बर्दिया । सरकारले समयमै धानको मुल्य नतोक्दा पश्चिम तराईका किसान मर्कामा परेका छन् । मुल्य एकिन नहुँदा सस्तो धान बेच्न बाध्य भएका छन् । धानको अन्न भण्डार मानिने बर्दिया जिल्लाको राजापुरमा झन्डै ४० प्रतिशत किसानले धान भित्र्याइसकेका छन् । सरकारले तीन वर्षयता धानको समर्थन मूल्य समयमा कायम नगरेका कारण किसान मर्कामा परिरहेका उनीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । संस्थानले मूल्य कायम नगरेकाले सस्तोमा बेच्न बाध्य भएको राजापुर नगरपालिका ३ का किसान रिता चौधरीले गुनासो व्यक्त गरेकी छिन् ।	थप पढ्नुहोस्